ကားလ်မာ့က်စ် | Communist Party of Burma
အင်မတန်စောတဲ့ ၁၈၄၄-၄၅ ခုနှစ် ကာလများကတည်းကပဲ မာ့က်စ်ဟာ အစောပိုင်းရုပ်ဝါဒရဲ့အားနည်းချက်တွေ- ဆိုလိုတာ လက်တွေ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပေါ်ဖို့အခြေအနေတွေ၊ ဒါမှမဟုတ်အရေးပါမှုကိုနားမလည်မှုတွေ-ကို စူးစမ်းလေ့လာပြီးနောက် သူဟာ သူ့တသက်တာမှာ သူ့ရဲ့သဘောတရားရေးလုပ်ငန်းနဲ့အတူ ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရဲ့နည်းပရိယာယ်ပြဿနာတွေကို တရံမလပ် သတိပြုအာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ အာရုံစိုက်ပြုစုခဲ့တာတွေကို ပမာဏကြီးမားလှတဲ့ မာ့က်စ်ရဲ့ရေးသားချက်တွေထဲမှာ တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်၁၉၁၃ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ သူနဲ့ အိန်ဂယ်တို့ရဲ့ အပြန်အလှန်ပေးစာလေးတွဲထဲမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရေးသားချက်တွေကို အားလုံးစုစည်းတာ၊ စစ်ဆေးတာ၊ လေ့လာသုံးသပ်တာ မလုပ်ရသေးပါဘူး။ ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီနေရာမှာမာ့က်စ်က ဒီနယ်ပယ်အကြောင်းမပါရင် ရုပ်ဝါဒဟာမပြည့်စုံ၊ တဖက်သတ်ကျ၊ အသက်မဲ့နေ လိမ့်မယ်လို့ သဘောထားခဲ့ကြောင်း သူ့ရဲ့ ယေဘုယျ အကျဆုံးနဲ့ တိုးတောင်းလှတဲ့ မှတ်ချက်တွေကနေ ကောက်ယူလို့ရကြောင်း ပြောတာနဲ့ပဲ ကျေနပ်ရပါတယ်။ မာ့က်စ်က ပစ္စည်းမဲ့ လူတန်းစား နည်းပရိယာယ်ရဲ့ အခြေခံလုပ်ငန်းကို သူ့ရဲ့ အနုပဋိလောမရုပ်ဝါဒ ကမ္ဘာ့အမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့အညီ တိတိကျကျ ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်။ ရှေ့တန်းရောက်လူတန်းစားရဲ့ မှန်ကန်တဲ့နည်းပရိယာယ်ဆိုတာဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်း တရပ်မှာရှိတဲ့ လူတန်းစား အားလုံးအကြားက ဆက်စပ်ရေးကို ပေါင်းရုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အဲဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းရောက်ရှိနေတဲ့အဆင့်၊ ဒီလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ တခြား လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဆက်စပ်မှုတို့ကိုပါ စဉ်းစားတွက်ချက်မှ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ လူတန်းစားအားလုံး၊ နိုင်ငံအားလုံးကို မလှုပ် မရှားတဲ့အသေအဖြစ် မကြည့်မြင်ဘဲ လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုရှိတဲ့အရှင် (လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုတရားတွေကို လူတန်းစားအသီးသီးရဲ့ စီးပွားရေးအခြေ အနေက ပိုင်းဖြတ်တယ်) အဖြစ် သဘောထားကြည့်မြင်ရပါတယ်။ လှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုကိုလည်း အတိတ်သဘောနဲ့သာမက၊ အနာဂတ်သဘောအရပါ ကြည့်မြင်ရပြီး နှေးကွေးတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုသာမြင်တဲ့ “ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုသမား evolutionists” တွေရဲ့အလွယ်တကူနားလည်မှုမျိုးမဟုတ်ဘဲ မာ့က်စ်က အိန်ဂယ်ဆီကိုရေးသလို အနုပဋိလောမ နည်းကျစွာ နားလည် ယူရပါမယ်။ သူရေးတာက “အဲဒီလိုအတိုင်းအတာနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမှာ အနှစ်၂၀ဆိုတာ တရက်ထက် မပိုဘူး၊ ဒါပေမဲ့ နောင်မှာတော့ အနှစ်၂၀ ကို လွှမ်းခြုံထားတဲ့နေ့ရက်တွေ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ (အတွဲသုံး၊ နှာ ၁၂၇)
ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအဆင့်တိုင်း၊ အချိန်တိုင်းမှာ ပစ္စည်းမဲ့နည်းပရိယာယ်ဟာ ဒီလူ့သမိုင်းရဲ့ မုချဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အနုပဋိလောမ တရားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။ တဖက်မှာတော့ ရှေ့တန်းရောက်လူတန်းစားမှာ လူတန်းစားအသိနဲ့ အင်အား-တက်ကြွထက်သန်မှုတို့ ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်ဖို့အတွက် နိုင်ငံရေးအရထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် လေးကန်ပျင်းတွဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ကာလတွေကို အသုံးချရပါမယ်။ နောက် တဖက်မှာတော့ ဒီအသုံးချတာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ “အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်”ဖြစ်တဲ့ “အနှစ်နှစ်ဆယ်ကို လွှမ်းခြုံတဲ့” နေ့ထူးနေ့မြတ်များရဲ့ လုပ်ငန်းထူးလုပ်ငန်းမြတ်တွေအတွက် လက်တွေ့အဖြေတွေ ရှာဖွေရေးဖြစ်ရပါမယ်။ ဒီဟာနဲ့ဆက်စပ်ပြီး မာ့က်စ်ရဲ့ အကြောင်းပြချက်နှစ်ချက်ဟာ အလွန်အရေးပါလှပါတယ်။ တချက်က သူ့ရဲ့ “အဘိဓမ္မာချွတ်ခြုံကျမှု(Poverty of Philosophy)ကျမ်း”ထဲမှာ ပါပြီး ဒါဟာ ပစ္စည်းမဲ့ လူတန်းစားရဲ့စီးပွားရေးတိုက်ပွဲ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင် ပါတယ်။ နောက်တချက်ကတော့ ကွန်မြူနစ်ပါတီကြေညာစာတမ်းထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရဲ့ တာဝန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ ပထမတချက်ကတော့ ဒီလိုပါ-
“အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းက တဦးနဲ့တဦးမသိကြတဲ့လူတွေကို နေရာတခုမှာ စုပေးလိုက်တယ်။ သူတို့ရဲ့ အကျိုးစီးပွား တွေကို ပြိုင်ဆိုင်မှုက ခွဲခြားပစ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ခတွေကို ထိန်းသိမ်းရေးဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဘုံအကျိုး စီးပွားဟာ သူတို့ကို တွန်းလှန်ရေးဆိုတဲ့ တူညီတဲ့စဉ်းစားမှုမှာ စုစည်းပေးလိုက်တယ်။ စုစည်းမှု- အစမတော့ သီးခြားစီ၊ ကိုယ့်အစုလေးတွေနဲ့ကိုယ်ဖြစ်နေတယ်။ ရင်ဆိုင်နေရတာက အမြဲတမ်းပဲ စုစည်းမှုရှိတဲ့အရင်း။ သူတို့ (အလုပ်သမားတွေ)အဖို့ အသင်းအပင်းရှိရေးဟာ လုပ်ခထက် အရေးကြီးလာပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ-တကယ့် ပြည်တွင်း စစ်မှာ- လာတော့မယ့်တိုက်ပွဲအတွက် လိုအပ်တဲ့အင်အားစုတွေဟာ စုစည်းညီညွတ်ကြ၊ ကြီးထွားလာကြပါတယ်။ ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့ အစည်းတွေဟာ နိုင်ငံရေးလက္ခဏာဆောင်လာကြပါတော့တယ်။ (မာ့က်စ်- အဘိဓမ္မာချွတ်ခြုံကျမှု။ ၁၈၄၇)
ကျွန်တော်တို့အဖို့ ဒီမှာပဲ နောင်လာမယ့် ဆယ်စုနှစ်တော်တော်များများအတွက် စီးပွားရေးတိုက်ပွဲတွေအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ နည်းပရိ ယာယ်လမ်းစဉ်ကိုရပြီ၊ ဒီကြာရှည်တဲ့ကာလကြီးအတွင်းမှာ ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားဟာ “ရောက်လာမယ့်”တိုက်ပွဲကြီးအတွက် ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဟာကို မာ့က်စ်နဲ့အိန်ဂယ်တို့က ညွှန်းဆိုခဲ့တဲ့ ဗြိတိသျှအလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုဥပမာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဥပမာတွေထဲမှာ စက်မှု“ဥစ္စာပစ္စည်း”က “ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားကိုဝယ်ယူဖို့” ကြိုးစားတာ (အပြန်အလှန်ပေးစာ အတွဲ၁၊ နှာ၁၃၆)၊ သူတို့ကို တိုက်ပွဲတွေကနေ အာရုံ လွှဲ ပစ်တာ၊ “အလုပ်သမားတွေကို ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ကျအောင်လုပ်တာ”၊ (အတွဲ ၂၊ နှာ၂၁၈)၊ ဗြိတိသျှအလုပ်သမားတွေ ဘယ်လို ဓနရှင်စိတ် ပေါက်ကုန်တယ်ဆိုတာတွေ- “ဒီအားလုံးထဲမှာ ဓနရှင်အပီသဆုံးနိုင်ငံက ဓနရှင်”တွေဟာ ဓနရှင်လူတန်းစားနဲ့အတူ ဓနရှင်မင်းဆိုးရာဇာတွေ (ချားတစ်စ် Chartists )၊ ဓနရှင်ပစ္စည်းမဲ့တွေ ရှိနေစေချင်ဟန် တူတယ်လို့ ဆိုတာ (၁၈၆၆၊ အတွဲ၃၊ နှာ ၃၀၅)၊ နောက်ပြီး ဗြိတိသျှ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်ကနေဘယ်လိုဖြစ်ပြီး “ပြတ်သားတဲ့ဓနရှင်လည်းမဟုတ်၊ အလုပ်သမားလည်း မဟုတ်တဲ့လူတွေ” ဖြစ်ကုန်ရတယ်ဆိုတာ (ဟိုးရုတ်ခ် ကို ရည်ညွှန်းချက်၊ အတွဲ ၄၊ နှာ၂၀၉)၊ ဗြိတိသျှရဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားနိုင်မှုကြောင့် အဲဒီ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု တည်ရှိနေသရွေ့ “ဗြိတိသျှလုပ်သားတွေဟာတုတ် တုတ်မှလှုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး” (အတွဲ၎၊ နှာ ၄၃၃) ဆိုတာတွေကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ တခုလုံးဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း (နောက်ပြီးရလာဒ်)နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စီးပွားရေးတိုက်ပွဲတွေရဲ့နည်းပရိယာယ်ကို ဒီနေရာမှာအလွန်ကျယ်ပြန့်၊ ခြုံငုံမိ၊ အနုပဋိလောမနည်းကျနဲ့ တကယ် တော်လှန်တဲ့ ရပ်တည်ချက်ကနေ နားလည်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်မြူနစ်ပါတီကြေညာစာတမ်းဟာ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲနည်းပရိယာယ်လမ်းစဉ်အတွက် အခြေခံကျတဲ့မာ့က်စ်ဝါဒမူတွေကို တင်ပြထားပါ တယ်။
“ကွန်မြူနစ်တွေဟာ လတ်တလောရည်မှန်းချက်တွေရရှိရေးအတွက်နဲ့ အလုပ်သမားလူတန်းစားရဲ့ ကာလအလိုက် အကျိုးစီးပွားတွေ ရရှိရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုမှာတော့ သူတို့ဟာ ဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ လက်ရှိနဲ့ အနာဂတ်တို့ကိုလည်း အာရုံပြုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ၁၈၄၈ခုနှစ်တုန်းက မာ့က်စ်က ပိုလန်နိုင်ငံက“လယ်ယာတော်လှန်ရေး”ကို ထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “၁၈၄၆ ခုနှစ်မှာ ကရာကို (Krakow) ပုန်ကုန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ ” ၁
ဂျာမနီမှာတော့ မာ့က်စ်က ၁၈၄၈ ခုနှစ်နဲ့ ၁၈၄၉ ခုနှစ်တို့မှာ အလွန်အကျွံတော်လှန်တဲ့ ဒီမိုကရက်တွေကိုထောက်ခံခဲ့ပြီး နည်း ပရိယာယ်လမ်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူပြောခဲ့တာကို ပြန်မရုပ်သိမ်းခဲ့ပါဘူး။ သူက ဂျာမန်ဓနရှင်လူတန်းစားကို “အစကတည်းက ပြည်သူတွေ အပေါ် သစ္စာဖောက်ရေးကို တိမ်းညွှတ်တဲ့အင်အား (ဓနရှင်လူတန်းစားဟာ လယ်သမားနဲ့ပူးပေါင်းမှသာ သူ့ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်နိုင် ပါတယ်)ဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟောင်းက အာဏာရကိုယ်စားလှယ်များနဲ့စေ့စပ်တယ်”လို့သဘောထားထားပါတယ်။ ဒါဟာ ဂျာမနီဓနရှင်ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးကို မာ့က်စ်ရဲ့သုံးသပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ဆိုင်စွာပဲ ဒါဟာလှုပ်ရှားနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ရုပ်ဝါဒအရခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာတဲ့၊ ဒါ့အပြင် နောက်ပြန်ဆွဲတာမဟုတ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့ ရုပ်ဝါဒဖြစ်ပါတယ်။
“ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိ၊ ပြည်သူလူထုအပေါ် ယုံကြည်မှုမရှိဘဲ အထက်ကို မြည်တွန်တောက်တီး၊ အောက်ကိုတော့ ကြောက်လန့် …. ကမ္ဘာ့မုန်တိုင်းရဲ့ခြောက်လှန့်မှုခံရ…. ဘယ်လိုအင်အားမှမရှိ၊ အရာရာကိုကူးချ…. ကိုယ်ပ်ိုင်တီထွင်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိ…. ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် သန်စွမ်းတဲ့လူတွေရဲ့ လူငယ်ပီပီလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပယ်ချရမယ်လို့ အသေသတ်မှတ်ထားတဲ့ ဦးနှောက် မလှုပ်ရှား နိုင်တော့တဲ့ အမြင်ကပ်စရာလူအိုကြီး ….”။ (အတွဲ၃၊ နှာ ၂၁၂)
နောက် အနှစ်၂၀လောက်အကြာမှာ မာ့က်စ်က အိန်ဂယ်ဆီကိုရေးတဲ့စာတစောင်မှာ (အပြန်အလှန်ပေးစာ အတွဲ၃။ နှာ၂၂၄) ၁၈၄၈ ခုနှစ် တော်လှန်ရေးရှုံးနိမ့်ရတာဟာ ဓနရှင်လူတန်းစားဟာ လွတ်လပ်စွာတိုက်ခိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်မှန်းချက်လေးတခုအတွက် ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ကျွန်သဘောက်ပြုမှုကို လက်ခံလိုက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ၁၈၄၈-၄၉ ခုနှစ် တော်လှန်ရေးကာလ ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာ မာ့က်စ်ဟာ တော်လှန်ရေးနဲ့ ကစားဖို့ ကြိုးစားတာမှန်သမျှကို ဆန့်ကျင်ပါတယ် (သူ့က ရှက်ပါနဲ့ဝီလစ်ခ် တို့ကို ပြန်တိုက်ခဲ့တာကို ကြည့်ပါ)။ ကာလသစ်နဲ့အညီ လုပ်ကိုင်ရေးကို တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အမည်ခံ“ငြိမ်းချမ်းတဲ့” နည်းတွေနဲ့ တော်လှန်ရေးအသစ်တွေအတွက် ပြင်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းကို လုပ်ချင်တဲ့ မာ့က်စ်ရဲ့ သဘောထားကို သူ့ရဲ့ အမှောင်ဆုံးကာလဖြစ်တဲ့ ဖောက်ပြန်လှတဲ့ ၁၈၅၆ ခုနှစ်က ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို သုံးသပ်မှုမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်- “ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ အရေးတခုလုံးဟာ ဒုတိယအကြိမ် လယ်သမားစစ်ပွဲရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံပြုမှုနဲ့ပေါ်ပေါက်တဲ့ ပစ္စည်းမဲ့လူ တန်းစားတော်လှန်ရေးပဲ ဖြစ်မယ် (အပြန်အလှန်ပေးစာ- အတွဲ၂၊ နှာ၁၀၈)။ ဂျာမနီက ဒီမိုကရေစီ(ဓနရှင်)တော်လှန်ရေး မပြီးဆုံးသေးချိန်မှာ မာ့က်စ်ဟာ ပစ္စည်းမဲ့ ဆိုရှယ်လစ်တွေ အတွက် နည်းပရိယာယ်တွေနဲ့ လယ်သမားတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားတို့အပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့တယ်။ သူက လာဆားလ် (Lasalle) ရဲ့သဘောထားဟာ “ပကတိဘာဝကျစွာပြောရရင် ပရပ်ရှားနိုင်ငံအလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုကို သစ္စာဖောက်တာဖြစ်တယ် (အတွဲ၃၊ နှာ ၂၁၀)။ အကြောင်းက လာဆားလ်ဟာ ဂျန်ကာတွေနဲ့ ပရပ်ရှားအမျိုးသားရေးဝါဒတို့ကို လက်ခံခဲ့လို့ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
၁၈၆၅ ခုနှစ်မှာ အိန်ဂယ်က“လယ်ယာအဓိကလုပ်တဲ့နိုင်ငံတခုမှာ စက်မှုပစ္စည်းမဲ့အမည်ခံပြီး ဓနရှင်တွေကိုတိုက်တာ၊ ပဒေသ ရာဇ်မင်းစိုး ရာဇာကြီးတွေရဲ့အောက်မှာ ဘာသာရေးနည်းနဲ့ပါ သွေးစုပ်ခံနေရတဲ့ ကျေးလက်ပစ္စည်းမဲ့တွေအကြောင်း တခွန်းမှမပြောရင် ဒါဟာ သူရဲဘောကြောင်တာပဲ”လို့ မာ့က်စ်နဲ့ သူရဲ့သတင်းစာကို ကြေညာချက်မထုတ်ပြန်မီမှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ (အတွဲ၃၊ နှာ ၂၁၇)
၁၈၆၄ ခုနှစ်နဲ့ ၁၈၇၀ ခုနှစ်အကြား ဓနရှင်ဒီမိုကရက်တစ်တော်လှန်ရေးရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ခံစားတဲ့ကာလပြီးဆုံးတဲ့အချိန်၊ ပရပ်ရှားနဲ့ ဩစတြီးယားက သွေးစုပ်သူလူတန်းစားတွေက အထက်စီးကနေ အဲဒီတော်လှန်ရေးကို တနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ အပြီး သတ်အောင် လုံးပန်းနေကြ ချိန်မှာ မာ့က်စ်ဟာ ဘစ္စမတ်နဲ့ ပလူးနေတဲ့ လာဆားလ်ကို ထိုးနှက်ရုံမက “ဩစတြီးယားဘက်လိုက်ဝါဒထဲကိုလျှောကျနဲ့ သီးခြားလက္ခဏာ ဝါဒကို ကာ ကွယ်တဲ့ လစ်ဘ်နက်ကိုလည်း ပြုပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မာ့က်စ်က ဘစ္စမတ်ကိုရော ဩစတြီးယားဘက်လိုက်ဝါဒကိုပါ မညှာမတာတိုက်ခိုက်တဲ့၊ “အောင်ပွဲရ”ပရပ်ရှားဂျန်ကာတွေကိုသာမက ပရပ်ရှားတွေရဲ့ စစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေက ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ အခြေအနေတွေကိုပါ ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ တော်လှန်တဲ့ နည်းပရိယာယ်တွေ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် (အပြန်အလှန်ပေးစာ- အတွဲ၃၊ နှာ ၁၃၄။ ၁၃၆၊ ၁၄၇၊ ၁၇၉၊၂၀၄၊ ၂၁၀၊ ၂၁၅၊ ၄၁၈၊ ၄၃၇၊ ၄၄၀-၄၄၁)။
၁၈၇၀ခုနှစ်။ စက်တင်ဘာလ ၉ရက်နေ့က မာ့က်စ်ရဲ့နာမည်ကျော် အင်တာနေရှင်နယ်အတွက်ပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ သူက ပြင်သစ် ပစ္စည်းမဲ့ လူတန်းစားကို အချိန်မတိုင်ဘဲ အုံကြွမှုမလုပ်ဖို့ သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း အုံကြွမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ မာ့က်စ်ဟာ “မိုးကောင်းကင်”ကို တဟုန်ထိုး ထိုးစစ်ဆင်ကြတဲ့ လူထုတွေရဲ့ တော်လှန်တဲ့လုပ်ရပ်ကို တက်ကြွစွာ ထောမနာပြုခဲ့ပါတယ် (မာ့က်စ်ရဲ့ ကူဂဲလ်မန်းဆီ ပေးစာ)။
အနုဋိလောမရုပ်ဝါဒရှုထောင့်ကကြည့်ရင် အဲဒီအနေအထားမှာ တော်လှန်ရေးလုပ်ရပ် ရှုံးနိမ့်သွားတာဟာ တခြားကိစ္စ အများအပြား မှာလိုပဲ တော်သေးတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားတိုက်ပွဲရဲ့ အထွေထွေလမ်းကြောင်းနဲ့ ရလဒ်မှာ ရရှိပြီးသားအနေအထားကို စွန့်လွှတ်လိုက်တာ၊ တိုက်ပွဲမတိုက်ဘဲ လက်နက်ချလိုက်တာတို့နဲ့စာရင် တော်သေးတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ အဲဒီလို လက်နက်ချမှုဟာ ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားကို စိတ်ဓာတ် ကျစေပြီး တက်ကြွမှုကို အားလျော့စေမှာပါ။ နိုင်ငံရေးထိုင်းမှိုင်းပြီး ဓနရှင်လူတန်းစားရဲ့ တရားဝင်တည်ရှိမှု လွှမ်းမိုးနေချိန်မှာ ဥပဒေတွင်း နည်းနာတွေ အသုံးပြုရေးကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်တဲ့မာ့က်စ်က ၁၈၇၇နဲ့၁၈၇၈ ခုနှစ်တို့မှာ ဆိုရှယ်လစ် ဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မို့စ်ရဲ့ “တော်လှန်ရေးစကားတွေ”ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြတ်သားခိုင်မာမှုနဲ့ တော်လှန်ရေးစိတ်ဓတ်မရှိတဲ့၊ ဆိုရှယ်လစ် ဆန့်ကျင်ရေး ဥပဒေ ပေါ်ထွက်လာရာမှာ ဥပဒေပြင်ပ တိုက်ပွဲဆင်နွှဲဖို့အသင့်မဖြစ်တဲ့ ဆိုရှယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုလည်း ပိုချင်သာ ပိုမယ်၊ အဲဒီထက် မလျော့တဲ့ ပြင်းထန် မှုနဲ့ ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။
၁။ ။ ဒီနေရာမှာ ဆိုလိုတာက ၁၈၁၅ခုနှစ်ဆီတုန်းက ဩစတြီးယား၊ ပရပ်ရှားနဲ့ ရုရှားနိုင်ငံတို့ရဲ့ ပူးတွဲချုပ်ကိုင်မှုအောက်မှာနေရတဲ့ ကရာကိုသမ္မတနိုင်ငံက အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအုံကြွမှုကို ဆိုလိုတာပါ။ ပုန်ကန်သူတွေဟာ အမျိုးသားအစိုးရတည်ထောင်တဲ့ အကြောင်း ကြေညာပြီး ပဒေသရာဇ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဖျက်သိမ်းကြောင်းနဲ့ လယ်သမားတွေကို အခမဲ့လယ်တွေပေးမယ့်အကြောင်းတို့ကိုလည်း ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။ တခြားကြေညာချက်တွေမှာတော့ လစာမြင့်တဲ့ အမျိုးသားစက်ရုံများ တည်ထောင်ကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံသားတွေအားလုံး တန်းတူမှုကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မကြာခင်မှာပဲ ဒီအုံကြွမှုဟာ ချေမှုန်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
← ကာချုပ်နဲ့စစ်တပ်မျက်နှာကို ကြည့်နေရသော အစိုးရနဲ့လွှတ်တော် အများသောက်တဲ့မိုးခါးရေ →